Muvhuro, Nyamavhuvhu 20, 2012 Svondo, Gunyana 8, 2013 Douglas Karr
Kana iwe uchinetseka kuti vatengesi vari kushandisa sei zvemagariro midhiya kumabhizinesi avo, Hubspot akaburitsa pamwechete infographic snapshot yekuisa mimwe mhedzisiro kubva kune 6,491 44.4 vekuongorora vakapindura ongororo yakaitwa naMoz. Iyo data yakaburitswa mubatanidzwa webinar pakati peHubspot neMoz nhasi. Imwe inonakidza stat, XNUMX% yevaongorori vakapindura vakati huwandu hwavo hwehukama nevezvenhau vezvematongerwo enyika hwaive mune yepamusoro kana hunyanzvi danho! Infographic kubva: HubSpot Kushambadzira Software. Disiki: Isu
SEOmoz yakaburitsa data kubva kunopfuura mazana mairi maasangano anoita SEO kune avo vatengi AYTM yakatora iyo data ndokuiisa mune infographic, Zvakadii SEO Zvinodhura?. Imwe yekutora yaive yakatanhamara kuona: Yakachena "SEO" vanachipangamazano / vamiririri vanogona kunge vachipera seyakafara "inbound kushambadzira" masevhisi mafemu (kupa SEO, zvemagariro, zvemukati, kutendeuka, analytics, nezvimwewo) kusimuka. Iyo data yakaratidza zana nemakumi mashanu vakapindura (600%) vachiti ivo vainyanya kutarisana neSEO apo imwe nhamba yakati kurei, 150 (25%),
Tsvaga Injini Kugonesa (SEO) inonyanya kukosha kune chero online kukura nzira. Ichokwadi kuti zvemagariro ibhemhemi kumusoro, asi chokwadi ndechekuti vangangoita makumi mapfumbamwe muzana evashandisi veInternet vanoita ongororo imwechete mukati mechikamu chepamhepo. Wedzera icho pamwe nekuti mushandi wekutsvaga anoshanda ane chinangwa chekuita sarudzo yekutenga yakawanda yenguva… uye iwe unokurumidza kutanga kuona kuti nei mabhizinesi ese achifanira
Mugovera, Nyamavhuvhu 21, 2010 Mugovera, October 18, 2014 Douglas Karr
Kugadzirisa kwangu kwekutanga kwakauya kubva pamazuva ekutanga eSEOmoz kungobva pane zvemahara zvemukati pane yavo saiti. Sezvo sangano redu nyowani renhau rakura uye SEO yave kunyanya kukosha… uye yakakosha kumagariro ... nguva yangu yandakapedzera paSEOmoz nekutaura kunhengo yave kuwedzera. Ichi chirevo chinonakidza chekutsvaga enjini yekutsvaga yakapihwa naMoz kumashure pavaiita SEOMoz. Inopa kumwe kujekesa kuri pachena pakutsvaga
Ndiri fan hombe yeRand Fishkin uye SEOmoz. Kazhinji ndinonzwa kugunun'una muKinjini Inotsvaga Yekuvandudza indasitiri nezveSEOmoz iri kutaura chokwadi kana kutadza… asi ini handisati ndaona sangano rimwe chete rinounganidza zviwanikwa zvakawanda, nyanzvi, maturusi uye bvunzo maererano neSEO. Rand, iye amene, chimwe chikonzero nei ndichida SEOmoz. Munguva pfupi yapfuura, pandakawana muitiro unoshamisa neimwe yemasaiti evatengi vangu pamapeji avo (mamirioni e) mapeji,
Kunakidzwa neLogo ... Indy Kofi Shop
Chitatu, November 28, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Vaya venyu vakaverenga bhurogu yangu kwechinguva vanoziva ini ndinoda mukombe mukuru wekofi. Shamwari dzangu dzenzvimbo dzinoziva kuti ndinofarira kutandara pamwe nechikwata paThe Bean Cup. Iyo inonakidza shopu yekofi… chikafu chikuru, vanhu vakanaka, mimhanzi mhenyu uye yakawanda yemacheya akasununguka uye kamuri. Yemunharaunda Indy waanoshanda naye Erik Deckers akanyora nezvezvimiririra kofi zvitoro pano uye akatovaka yake Google Mepu kuratidza vanhu kupi